ရန်ကုန်မြို့၊ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Tone Tinnes နှင့်အဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | MONREC
ရန်ကုန်မြို့၊ နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Tone Tinnes နှင့်အဖွဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းအား လာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နော်ဝေနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H. E. Ms. Tone Tinnes နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ ၁၃-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၂၈)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာရဲမြင့်ဆွေ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်ရီ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော် နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်း တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် နော်ဝေနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအကြား နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေစီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ ရေသယံဇာတအရင်းအမြစ် ဘက်စုံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော ပြန်လည်တည်ထောင်ရေး (၁၀)နှစ် စီမံကိန်းအရ ဆောင်ရွက်မည့်ဒေသများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တော ဖုံးလွှမ်းမှုနှင့် သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ဒေသများ၊ ဧရာဝတီမြစ်၏ ရေဝေရေလဲဒေသများ၌ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးအခြေအနေများ၊ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု ဆောင်ရွက်မည့်အစီအမံများ၊ အဏ္ဏဝါစွန့်ပစ် ပလတ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ကုန်းတွင်းမှ အခြေခံသည့် ပလတ်စတစ်အမှိုက်များ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစီမံချက် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဒေသဆိုင်ရာလုပ်ငန်း စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုနှင့် သစ်တောအတန်းအစားကျဆင်းမှုမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း (REDD+) ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုများ၊ အင်းလေးကန်ဒေသ ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ သစ်တောမီးကာကွယ်ရေး၊ မီးခိုးမြူပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးအတွက် အပူပိုင်းဇုန်ဒေသနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများ၊ ပဲရစ်သဘောတူညီချက်အရ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေးနှင့် သက်ရောက်မှုလျှော့ချရေးအတွက် စွမ်းအင်နှင့်သစ်တောကဏ္ဍတို့မှ ဆောင်ရွက်သည့်အစီအမံများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့နည်းသက်သာစေသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ခြင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။